မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၈) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၈)
မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၈)
Posted by aye.kk on Jun 20, 2012 in My Dear Diary | 15 comments
ဦး ၏ လက် ဖ ၀ါး ပြင် ကို သေ ချာ ကြည့် မိ ရာ တွင်……..
ဦး ၏ လက် ဖ ၀ါး လက် ဖ ၀ါး ပြင် ရေ ဇာ များ က နူး ညံ့ နေ ပါ သည် ။ သ င်္ဘော စက် ပြင် အင် ဂျင် နီ ယာ ဖြစ် နေ ၍ လား တော့ မ သိ ၊ လက် ဖ ၀ါး ရေ ဇာ ကောင်း မွန် သော် လည်း ၊ လက် ဖ ၀ါး ပြင် နှစ် ဖက် စ လုံး ရှိ ဂြိုလ် ခုံ လက် ချောင်း များ အောက် တွင် ၊ အ သာ မာ တက် လျှက် ရှိ နေ သည် ကို တွေ့ ရှိ ရ ပါ သည် ။
ဦး က တော့ ပြော ပါ သည် ၊ အစ် မ ကြီး ကျယ် နှင့် ပတ် သက် ပြီး သ င်္ဘော ကု မ္ပ ဏီ တ ခု မှ အ လုပ် ထွက် လိုက် ခဲ့ သ ဖြင့် ၊ တော် တော် နှင့် အ လုပ် ရှာ မ ရ ပဲ ၊ နိုင် ငံ ခြား တွ င် ခ ဏ သောင် တင် နေ သည် ဟု ပြော ပါ သည် ။ အ လုပ် အ ကိုင် မှာ လည်း တော် တော် နှင့် ပင် မ မြဲ ပဲ ရှိ နေ ခဲ့ ရာ မှ ၊ အ ခြား
သ င်္ဘော ကု မ္ပ ဏီ တ ခု မှ လစ် လပ် နေ ရာ ရှိ သ ဖြင့် ၊ တ တိ ယ တန်း အင် ဂျင် နီ ယာ ဘ ၀ ဖြင့် စက် ပြင် အ လုပ် တစ် နေ ရာ ရ ရှိ ခဲ့ သည် ဟု ဆို ပါ သည် ။
အစ် မ ကြီး ကျယ် ကြောင့် သာ အ လုပ် မ ထွက် ဖြစ် ခဲ့ ပါ က ၊ ယ ခု ဆို လျှင် ပ ထ မ လုပ် ခဲ့ သည့် သ င်္ဘော ကု မ္ပ ဏီ တွင် မြဲ နေ မည် ဆို ပါ က ချိ အော့ ဖ် ဆာ ဖြစ် နေ လောက် ပြီ ဟု ဆို ပါ သည် ။ ယ ခု လက် ရှိ လုပ် နေ သော သ င်္ဘော ကု မ္ပ ဏီ တွင် ၊ အ လုပ် က စက် ပြင် ဖြစ် ပြီး ဒု တိ ယ တန်း အင် ဂျင် နီ ယာ မှ ၊ ပ ထ မ တန်း အင် ဂျင် နီ ယာ အ ဆင့် ကို ဖြေ ဆို ထား ဆဲ ဖြစ် ကြောင်း ပြော ပြ ပါ သည် ။
ဦး ၏ လက် ဖ ၀ါး ပြင် နှစ် ဖက် စ လုံး ရှိ ၊ နှ လုံး သား ရေး ရာ (၀ါ) အ ချစ် မေ တ္တာ တ ဏှာ ပေ မ လမ်း ကြောင်း ကား ၊ ကြောက် မက် စ ဖွယ် ကောင်း လောက် အောင် ၊ အ ချစ် ဒု က္ခ များ ခံ စား နေ ရ သည် ဆို မှာ ယုံ မှား ဖွ ယ် နိုင် ရာ ရှိ မည် မ ဟုတ် ပါ ချေ ။
ဦး လက် ဖ ၀ါး ပြင် ရှိ ၊ အ နှီ ပေ မ ဖြစ် သော အ ချစ် မေ တ္တာ လမ်း ကြောင်း ကား ၊ ကြာ သာ ပ တေး ဂြိုလ် ခုံ အ ပြင် ဘက် စွန်း မှ အ ဖျား ခံ လာ သ ဖြင့် ၊ မျက် ကန်း တ စ္ဆေ အ ချစ် မျိုး ဖြစ် နေ သည် ကို အံ့ သြ ဖွယ် ရာ တွေ့မြင်
ရ ပါ သည် ။ မိ မိ ၏ အ ချစ် ကို လည်း အ ထင် ကြီး လွန်း ကာ အ ပြစ် နှင့် ပျက် ပြယ် မှု ကို မ မြင် နိုင် ပဲ ၊ အ ကြောင်း အ ကျိုး မ ထင် မြင် နိုင် အောင် ဂုဏ် ယူ နေ တတ် သူ တစ် ယောက် ဖြစ် နေ သည် ကို မျက် ၀ါး ထင် ထင် ကျ မ မှ တွေ့ရှိ လိုက် ရ ပါ ပေ သည် ။
ပို ဆိုး သည် ကား ဦး ၏ နှ လုံး သား ရေး ရာ တ ဏှာ ပေ မ လမ်း ကြောင်း ၊ ညာ လက် ဖ ၀ါး ပြင် တ န င်္ဂ နွေ ဂြိုလ် ခုံ လက် ချောင်း အောက် တွင် ပြတ် နေ ပါ သည် ။ ထို အ ချက် က ကျ မ ၏ လက် ဖ ၀ါး ပြင် ညာ ဖက် လက် ပုံ စံ နှင့် တ ထေ ရာ တည်း ၊ တ ထပ် တည်း တူ လျှက် ရှိ နေ သည် ကို အံ့ သြ ဖွယ် ရာ တိုက် ဆိုင် လွန်း လှ စွာ တွေ့မြင် လိုက် ရ ပါ ပေ သည် ။
ဦး ၏ လက် ဖ ၀ါး ပြင် နှင့် ကျ မ လက် ဖ ၀ါး ပြင် ရှိ ထို တူ နေ သော အ ချက် ကို ကျ မ မှ ဦး အား ပြ လျှင် ၊ ဦး က မ တုန် လှုပ် ပါ ၊ကံ ကြမ္မာ ဆို တာ မွေး က တည်း က ပင် သတ် မှတ် လာ ပြီး သား ဟု ပြော ပါ သည် ။ ဒါ ကြောင့် လည်း ဒီ လို ကြီး မား လှ သည့် ၊ ရေ စက် မျိုး အ နေ ဖြင့် လာ ကြုံ ဆုံ ရ ခြင်း ဖြစ် ရ တာ နေ မှာ ဟု ပြော ပါ သည် ။
လူ ကုံ တံ ပ ညာ တတ် အ သိုင်း ၀ိုင်း မှ ဖြစ် နေ ၍၊ ဦး ကို ကြိုက် နှစ် သက် သည့် မိန်း က လေး များ လည်း လွန် စွာ ပေါ များ လျှက် ရှိ သည် ဟု ပြော ပြ ပါ သည် ။အင် ဂျင် နီယာ ဆို သည့်ဘွဲ့ ရ ထား သ ဖြင့် ၊ ရုပ် ဆိုး နေ ပင် ဖြစ် လင့် က စား ၊ ဦး ကို လာ ရောက် စေ့ စပ် သည့် သူ တွေ ၊ ကမ်း လှမ်း မှု တွေ ပေါ များ ခဲ့ ကြောင်း ဦး မှ ပြော ပြ ပါ သည် ။
ကျ မ က လည်း…………
ဦး အ နေ ဖြင့် ၊ မိ မိ နှင့် အ သက် ကွာ ဟ မှု သိပ် မ ရှိ သူ ဆို လျှင် ယူ သင့် ကြောင်း ၊ စဉ်း စား သင့် ကြောင်း ၊ လက် သင့် ခံ နိုင် ရန် တိုက် တွန်း ပြော ဆို မိ ခဲ့ ပါ သည် ။
င်္သ ခန်း စာ အ နေ ဖြင့် ၊ ဦး က ထပ် မံ ပြော ပြ သည် မှာ…….
လွန် စွာ ပင် ဂုဏ် ပ ကာ သ န မက် လွန်း လှ သည့် ၊ ကျောင်း နေ ဖက် သူ ငယ် ချင်း မိန်း တစ် ဦး ရှိ ကြောင်း ၊ နောက် ဆုံး တွင် ဦး ကို မ စောင့် နိုင် သ ဖြင့် ၊ ဦး ၏ သူ ငယ် ချင်း ပိုက် လော့ တစ် ဦး ကို မ ချစ် နှစ် သက် ပါ ပဲ နှင့် လက် ထပ် သွား ခဲ့ ကြောင်း ပြော ပြ ပါ သည်။ အိမ် ထောင် ကျ ပြီး နောက် ပိုင်း တွင် လည်း၊ လင် ယော င်္ကျား မ သိ အောင် ထပ် မံ ပွေ ရှုပ် နေ သည် ကို ၊စိတ် မ ချမ်း မြေ့ ဖွယ် ရာ ၊ ကြား သိ ခဲ့ ရ သည် ဟု ဦး က ပြော ပြ ပါ သည်။
ထို ဂုဏ် ပ ကာ သ န မက် မှု အ ပေါ် အ ခြေ ခံ ရင်း ၊ လက် ထပ် ယူ ခဲ့ သ ဖြင့် နောက် ဆက် တွဲ အိမ် ထောင် ရေး ၏ ၊ ဆိုး ကျိုး များ ကို တွေ့မြင် ရသည် မှာ လည်း စိတ် မ ချမ်း ဖွယ် ရာ ဖြစ် သည် ဟု သင် ခန်း စာ အ နေ ဖြင့် ပြော ပြ ပါ သည် ။
ဦး မှ လည်း သူ ငယ် ချင်း ဖြစ် နေ ၍ ၊ သူ ငယ် ချင်း အား အ နေ ထိုင် ဆင် ခြင် တုံ တ ရား ထား ရှိ တတ် ရန် နှင့် ၊ နင် အ ခု လို နောက် မီး လင်း နေ သည့် ကိစ္စ မ ဖွယ် မ ရာ ပြု လုပ် နေ ပါ က ၊ ခင် ပွန်း ဖြစ် သူ မှာ လေ ယာဉ် မောင်းသူ ဖြစ် ၍ အသက် အ န္တာ ရယ် နှင့် ရင်း ပြီး ၊ တာ ၀န် ထမ်း ဆောင် နေ သူ ဖြစ် ၍ ၊ အ လုပ် လုပ် ကိုင် ရာ တွင် မ တော် တ ဆ မှား ယွင်း သွား ပါ က ၊ နင် ပါ က လေး တ ပုံ ကြီး နှင့် မု ဆိုး မ ဖြစ် ခါ ၊ ကျန် ရစ် နိုင် သည် ဟု ၊ သွား ရောက် ပြော ဆို ခါ ဆုံး မ သ တိ ပေး ခဲ့ ရ ဘူး ကြောင်း ဦး က ပြော ပြ ပါ သည် ။
ရေ လယ် ဘု ရား လိုက် ပို့ စဉ် တုံး က အ ဖြစ် ပျက် ကို ၊ ကျ မ မှ သ တိ ရ မိ သွား ခါ မေး မိ ချင် လျှက် က ၊ သူ များ အ ကြောင်း စပ် စု သည် ဟု ဦး ထင် မြင် မည် ကို မ လို လား သ ဖြင့် မ မေး မိ တော့ ပါ ချေ ။ ဦး အ နေ နဲ့ က………..
ဦး ၏ လက် ရှိ အ သိုင်း ၀ိုင်း ထဲ တွင် ၊ အ ချစ် မေတ္တာ ရေး ရာ နှင့် ပတ် သက် ၍ ဂုဏ် ပ ကာ သ န ပေါ် တွင် အ ခြေ ခံ ပြီး ကြိုက် နှစ် သက် မှု ရှိ သော မိန်း ခ လေး များ အား ၊ အထင် လည်း မ ကြီး ၊ ကြိုက် နှစ် သက် ခြင်း လည်း မ ရှိ ပါ ဦး ၏ စိတ် ထဲ တွင် ၊ အ လွန် လည်း မုန်း သည် ရွံ လည်း ရွံ သည် ၊ ချစ် လို့ ပင် မ ရ ပါ ၊ ဟု ထုတ် ဖော် ဖွင့် ဟ ပြော ဆို ပြ ပါ သည် ။
ဦး ၏ စိတ် ထား ကို တော့ ကျ မ မှ လေး စား သွား မိ ခဲ့ ရ ပါ သည် ။
ထို့ အ တူ ကျ မ ကိုယ် ၌ က လည်း မိ ဘ ပိုက် ဆံ ရှိ စဉ် လက် ထက် က ကိုယ့် နှင့် ဂုဏ် ရည် တူ များ အား ၊ အ ထင် လည်း မ ကြီး ၊ စိတ် လည်း မ ၀င် စား ခဲ့ ပါ ။ မိ ဘ အား ကိုး နှင့် ချည်း ကပ် လာ သူ များ ကို လွန် စွာ မုန်း မိ ခဲ့ သည့် စိတ် က ဦး နှင့် တ ထပ် တည်း ကျ ကာ ၊ ဆင် တူ နေ ပါ သည် ။ ဦး နှင့် ကျ မ ၏ အ ဖြစ် မှာ ၊ တ နင်း င်္ဂ နွေ ဂြိုလ် ခုံ အောက် ရှိ အ နှီ ချစ် မေတ္တာ တ ဏှာ ပေ မ လမ်း ကြောင်း ကျိုး ပြတ် နေ မှု ၏ တူ ညီ သော ဆိုး ကျိုး ပင် ဖြစ် ပါ သည် ။
ဦး နှင့် ကျ မ ၏ အ ဖြစ် က ၊ ချစ် မေတ္တာ ရေး တွင် ထား ရှိ သည့် မာ န တ ရား ကား ၊ လွန် စွာ မှ ပင် တိုက် တိုက် ဆိုင် ဆိုင် တ ထပ် တည်း ကျ ရောက် လျှက် ရှိ သည် မှာ လည်း အံ့ သြ ဘွယ် ရာ ကောင်း လှ ခဲ့ ပါ သည်။
ဦး ကား အ နှီ ပေ မ ချစ် မေ တ္တာ တ ရား နှင့် ပတ် သက် ၍ လွန် စွာ ပင် အ ထင် ကြီး ကာ ဂုဏ် ယူ တတ် သည့် သူ တ ယောက် ဖြစ် ခဲ့ သူ ဆို မှာ လ က္ခ ဏာ အ ရ ငြင်း ဆို ဖွယ် ရာ မ ရှိ ပါ တော့ ချေ ။ ဒါ ကြောင့် လည်း အစ် မ ကြီး ကျယ် ကို က မ္ဘာ လ ဆန်း (၁) ရက် နေ့အ ထိ စောင့် ရ မည် ဆိုပါ လျှင် စောင့် နိုင် မည့် လူ စား မျိုး ပေ တည်း ။
ထူး ခြား ဆန်းကျယ် လှ သည့် ချစ် မေ တ္တာ လမ်း ကြောင်း က ၊ ညာ လက် ဖ ၀ါး ပြင် ၌ နှစ် ထပ် ဖြစ် လျက် အ ရံ လမ်း ကြောင်း ပါ ရှိ နေ သ ဖြင့် ၊ အချစ် မေ တ္တာ စိတ် နှစ် မျိုး ဖြစ် ပေါ် နေ ရ သည် ကို လည်း တွေ့ရှိ လိုက် ရ ပေ သည် ။
ထို သို့ အ ချစ် မေတ္တာ စိတ် ဖြစ် ပေါ် ကာ ၊ ခံ စား နေ ရ သည့် ဦး ၏ ဝေ ဒ နာ ချစ် ဒု က္ခ ဆင်း ရဲ မှု ကား ကြီး မား လှ ပေ စွ ။
အ ချစ် နှင့် ပတ် သက် သည့် ကြောက် မက် ဖွယ် ကောင်း လှ ပါ သော ဆင်း ရဲ ဒု က္ခ ကို ရင် ဆိုင် ကြုံ တွေ့ခံ စား နေ ရ သည် မှာ ဧ ကန် အ မှန် ပင် ဖြစ် နေ ပါ တော့ သည် ။ ကံ ကြမ္မာ ၀ဋ် ကြွေး ကား ကြောက် စ ရာ ပင် ကောင်း လှ ပါ တော့ သည် ဟု ကျ မ မှ ထင် မြင် ယူ ဆ နေ မိ ပါ တော့ သည် ။
ထို နှ လုံး သား ရေး ရာ တ ဏှာ ပေ မ လမ်း ကြောင်း မှာ နှစ် ထပ် ပါ ရှိ နေ ခြင်း သည် ကား ၊ တစ် ကြောင်း တည်း ပါ ရှိ နေ သူ လောက် အောင် မြင် ခြင်း မ ရှိ နိုင် ပါ ၊ အ ချစ် ရေး နှင့် ပတ် သက် လျှင် များ သော အား ဖြင့် ကျ ဆုံး ရ သည် က သာ များ ပါ သည် ။
မျက် ကန်း တ စ္ဆေ အ ချစ် မျိုး ဖြစ် ပါ သည် ။ အ ချစ် မေ တ္တာ လမ်း ကြောင်း က တ န င်္ဂ နွေ ဂြိုလ် ခုံ အောက် ၌ ကျိုး ပြတ် လျှက် ရှိ နေ ခြင်း သည် က အ ချစ် မေ တ္တာအ ရေး တွင် ဂုဏ် ပ ကာ သ န ငွေ ကြေး များ က အ တား အ ဆီး ဖြစ် ပေါ် လျှက် ၊ အ နှောက် အ ယှက် ကြုံ တွေ့ခံ စား ရ မှု များ ကို ပြ ဆို နေ ပါ သည် ။
ဦး ၏ လက် ဖ ၀ါး ပြင် ညာ ဖက် ၌ ပါ ရှိ နေ သော ဒု တိ ယ အ ချစ် မေတ္တာ လမ်း ကြောင်း က ၊ နောက် ထပ် အ ချစ် ဒု က္ခ တ မျိုး ထပ် မံ ခံ စား ရ ခြင်း အ အ ပေါ် တွင်၊ ကျ မ မှ ဦး ကို သ နား မ ဆုံး ဖြစ် ရ ကာ ဂ ရု ဏာ သက် ခဲ့ မိ ရ ပါ တော့ သည်။ သြော်…..
မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး က ၊ သ နား စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး ဖြစ်
နေ ခဲ့ မှန်း ကျ မ မှ ခံ စား သိ နား လည် သွား ခဲ့ ရ ပါ သည် ။
ဒီတော့ မုန်းစရာကောင်းသည့်ဦးကနေ သနားစရာကောင်းသည့်ဦး ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။
အန်တီအေး ရေ ဦးဆိုတဲ့သူက နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာ ကျွန်းခံနေတဲ့သူထက်တောင် ဆိုးနေတယ် ထင်မိတယ်။
စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ သီချင်းထဲကလို မျက်ကန်းအချစ်သမား ဇာတာ လို့ ပြောရမလားးးးးးးးး
နောက်ပြီး ဦး နဲ့ မအေး ရဲ့ လက္ခဏာတွေ တူနေတယ်ဆိုတော့…….
မအေးလည်း နှလုံးသားရေးရာမှာ ဒုက္ခတွေများ များခဲ့သလားလို့ …………….
( မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး က ၊ သ နား စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး ဖြစ်နေ ခဲ့ မှန်း
ကျ မ မှ ခံ စား သိ နား လည် သွား ခဲ့ ရ ပါ သည် ။ )
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ အန်တီ လား မမလား မသိတော့ အန်တီမမရေ
ကျနော် ချစ်စရာကောင်းသောကြောင့် ချစ်စရာ အချစ်တို့၏ဆရာဖြစ်သောကြောင့် ချစ်ဆရာ
ချစ်စ/ဆရာ မှာလည်းတာဝန်တွေရှိလာပါပြီလို့ ခံစားရပါတယ်ခင်ဗျာ
မုန်းစရာကောင်းတဲ့ဦးးးး ဆိုတဲ့ အမည်နာမကို ကင်ပွန်းတပ် ထားကတည်းက ဦးးးးးးးးးးးးးဆိုတဲ့
အဲ့သည် ဦး ဟာလေ အရမ်းချစ်ဘို့ ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဆောင်နေပြီဆိုတာ
ချစ်စ/ဆရာ ဟာဆိုရင်ဖြင့် သိနှင့်ခံစား ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ချစ်စရာကောင်းသောကြောင့် ချစ်စရာ အချစ်တို့၏ဆရာဖြစ်သောကြောင့် ချစ်ဆရာ
အေးဗျာ.. တော်ပါသေးရဲ့ ..
ကျုပ်မောင်ပေသည်လဲ ၊ အမအေးရဲ့ “ဦး” လို လက္ခဏာ မပါလာလို့ ၊ စိတ်အေးရတယ်ဗျား ။
စာဖတ်သူကို စကတည်းက ခုထိ တောက်လျှောက် ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်…
ရင်ထဲ ခံစားကြည့်လို့ ရတယ်….
ဒါကြောင့် မမ/အန်တီ ရေးတဲ့ တခြားစာတွေကိုလည်း ရှာဖတ်ဖြစ်သွားပြီ…..
အန်တီအေးရေ … အပိုင်း ၇မှာဆုံးသွားတဲ့ … ပဟေဌိစကားတစ်ခွန်းက …. ဘာများလဲဟင် … အပိုင်း၈မှာ အဲ့ဒါလေး ရှာဖတ်တာ မတွေ့မိလို့ …. ။
အသက် ဘယ် အရွယ် ထဲက လက္ခဏာ ကို လေ့လာလဲ မသိဘူးနော်။
ပထမ အသက်က မှန်းခြေ ၁၂နှစ် နောက်ထပ် ပြန်တွေ့တော့ အသက် ၂၀၀န်းကျင် ၂၀ မပြည့်သေးတဲ့ အရွယ်မှာတောင် တော်တော် ကြည့်တတ်နေပြီ ထင်တယ်နော်။ လေ့လာမှု စွမ်းအားနဲ့ ပါရမီ ပါလို့ ထင်ပါရဲ့။
ငယ်ငယ်က လေ့လာ ခဲ့တာ သိပါတယ်။ အခု ရေးထားတာ အပျော်တမ်း ၀ါသနာပါယုံ အဆင့် မဟုတ်ပဲ အသေးစိတ်ဆန်လို့ အံသြနေမိလို့ပါ။ ချီးမွမ်းတာပါ။
အန်တီအေးရေ အဲဒါဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုး နှလုံးလမ်းကြောင်းက အကောင်းဆုံးလဲဟင်။ အဖျားနားမှာ အကြောင်းသေးသေးလေးတွေဖြာထွက်တဲ့ လမ်းကြောင်းမျိုးဆိုရင်ကော ဘာဖြစ်တတ်လဲဟင်။
ဟိုက် ရှလဘား .. အန်တီအေး ဖော်လိုက်တာနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းနားတော့ နူဘာဂိုဏ်းသားတွေ ကပ်လာတော့မယ် … ဦးကြောင်ကြီးမဖတ်မိပါစေနဲ့လို့လဲ မြန်မြန်ဆုတောင်းတော့ … :grin: :girn: